September 24, 2021 – သုတရသ
“အုနျးရညျရဲ့ အသားရနှေငျ့ ကနျြးမာရေးအကြိုးကြေးဇူး”
Sep 24, 2021 Shwe Myanmar
Zawgyi အုန်းရည်ဟာ အသားအရည်အတွက်ဘယ်လိုကောင်းကျိုးတွေရှိစေလဲ? အလှအပရေးရာနဲ့ပတျသကျလို့ကြှမျးကငျြသူပညာရှငျတှကေ အုနျးရညျဟာ အသာသးအရညျကနျြးမာဖို့နဲ့လှပစဖေို့အကြိုးကြေးဇူးတှအေမြားကွီးပေးနိုငျတယျလို့ဆိုခဲ့ကွပါတယျ။အုနျးရညျက အသားအရညျအတှကျဘယျလိုတှအေသုံးဝငျ အကြိုးရှိနတောလဲ? သဘာဝအာဟာရဓာတ်တွေပြည့်ဝ အုန်းရည်ဟာ အာဟာရဓာတ်တွေ၊ဗီတာမင်တွေကြွယ်ဝစွာပါဝင်တဲ့ သဘာဝအသီးအနှံတစ်မျိုးဖြစ်ပါတယ်။အထူးသဖြင့် အသားအရည်ကျန်းမာလှပစေတဲ့ကယ်လ်စီယမ်ဓာတ်တွေ၊ဗီတာမင်စီ၊ဗီတာမင်အေ၊ဗီတာမင်ကေ၊ပရိုတင်း၊သံဓာတ်နဲ့ပိုတက်ဆီယမ်ဓာတ်တွေကြွယ်ဝစွာပါဝင်တယ်လို့ ဒေါက်တာ Erin Gilbert ကပြောထားပါတယ်။အုန်းရည်သောက်ပေးတဲ့အခါ ခန္ဓာကိုယ်ထဲက အဆိပ်အတောက်တွေလည်းကင်းစင်သွားစေပါတယ်။ ဝက်ခြံတိုက်ထုတ်ပေးနိုင်…
“မဖွဈမနေ မှ တျ သားထိုကျသော အိမျ သုံး လြှို့ ဝှ ကျ န ညျး လမျးလေးတှေ တနျ ဘိုး အ လှ နျ ရှိ သော သဘာဝ ဆေး မွီး တိုမြား”
Zawgyi ဝက်ခြံပျောက်နည်း ကြက်ဟင်းခါးအစေ့ကို ဆားနှင့်ရောပြီးညက်အောင်ကြိတ်ပါ။ ရလာသောအနှစ်ကိုအရက်အနည်းငယ်နှင့်သင့်ရုံဖျော်ပြီးနောက် ရလာသော အရည်နှင့်ဝက်ခြံများကိုလိမ်းပေးပါက ဝက်ခြံများ ပျောက်ပါသည်။ အရိုးစူးလျှင်ပျောက်နည်း ငါးရိုးစူးလျှင် လည်ချောင်းထဲမှ ထုတ်မရပါကလျှင်မြန်စွာကြက်ဥအစိမ်းကိုခွဲပြီး တစ်ခါတည်းမျိုချလိုက်ပါက ငါးရိုးသည်တစ်ခါတည်းလျှောကျသွားပါလိမ့်မည်။ ခြေထောက်ကို သံစူးလျှင် သက်သာနည်း… သံစူးသောနေရာတွင် ဆားနှင့်ဂျင်းကိုကြိတ်ပြီး…
“အာရုံကွောအားနညျးနပွေီဆိုတာ ပွသနတေဲ့လက်ခဏာ (၇) မြိုး”
Zawgyi အာရုံကြောအားနည်းနေပြီဆိုတာ ပြသနေတဲ့လက္ခဏာ (၇) မျိုး .. လူ့ခန်ဓါကိုယျရဲ့အာရုံကွောစနဈဟာ တကိုယ်လုံးကိုဖြန့်ကြက်ထားတာမို့ အရမ်းကိုအရေးပါပါတယ်။ သူ့ရဲ့လုပ်ဆောင်ချက်ကလည်း လှုပ်ရှားမှုကအစ ဦးနှောက်ဉာဏ်ရည်တွေအထိကို သက်ရောက်မှုကြီးမားတာမို့ အာရုံကြောစနစ်ကျန်းမာနေဖို့ လိုပါတယ်။အာရုံကြောအားနည်းနေပြီဆို လူက တကယ်ကိုပေါက်ကရတွေဖြစ်ပြီး အလုပ်လုပ်နိင်စွမ်းတွေထိခိုက်ပါလိမ့်မယ်။ အာရုံကြောအားနည်းရင်ဘယ်လိုလက္ခဏာတွေဖြစ်လာတတ်လဲ ထုံကျဉ်တာ…